Tag: bhadhara pakudzvanya | Martech Zone
Keywords agara achikosha kune SEO. Ivo vanoita kuti injini dzekutsvaga dzinzwisise kuti zvemukati nezvei saka zviratidze muSERP yemubvunzo wakakodzera. Kana iwe usina mazwi makuru, peji rako haringasviki kune chero SERP sezvo injini dzekutsvaga dzisingazokwanise kuinzwisisa. Kana iwe uine mamwe mazwi asina kunaka, ipapo mapeji ako anozoratidzwa kune zvisina basa mibvunzo, izvo zvinounza kusashandisa kune vateereri vako kana kudzvanya kwauri.
Hapana mubvunzo kuti chero munhu anoshanyira saiti yangu haazive kuti ndinoita mari saiti neGoogle Adsense Ndinoyeuka pandakatanga kunzwa Adsense ichitsanangurwa, munhu wacho akati yaive Webmaster Welfare. Ini ndinowanzo bvumirana, haina kana kubhadhara yangu yekutambira mitengo. Nekudaro, ini ndinotenda kudzikisa mutengo wesaiti yangu uye Adsense yakanangwa nenzira yavo neyakafanira kushambadza. Izvo zvakati, chinguva chidiki ndakachinja marongero angu eAdsense